एनएससीएआई - अमेरिकाले एआईमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी बजार समाचार
मार्च 2, 2021 मार्च 2, 2021 बेनेडिक्ट कासिगारा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, चीन, चीन फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, चीन थोक र B2B, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख
"चीनले विश्वभर तानाशाही प्रवद्र्धन गर्न आक्रामक दबाब दिइरहेको छ," एनएससीएआईका एक अधिकारीले रोयटर्सलाई भने।
"यी सम्बन्धहरू बिच्छेद गर्न नाटकीय कदमहरू अमेरिकीहरूका लागि महँगो हुन सक्छ र विश्वभर फिर्ता लिन सकिन्छ।"
लक्ष्य भनेको चीनको सेमीकन्डक्टर टेक्नोलोजी सधैं दुई पुस्ताले संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा पछाडि बनाउनु हो।
कृत्रिम बुद्धिको नियमन भनेको सार्वजनिक क्षेत्रका नीतिहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रबर्द्धन र विनियमनको लागि कानूनको विकास हो; यो अल्गोरिदमको व्यापक नियमनसँग सम्बन्धित छ। एआईको लागि नियामक र नीति परिदृश्य यूरोपियन युनियन सहित विश्वव्यापी न्यायक्षेत्रमा एक उदाउँदो मुद्दा हो।
"यो सेमीकन्डक्टरहरूमा फोडा हुन्छ।" सरकारी अधिकारीले भने, "हाम्रो नम्बर १ 'सुरक्षा' रणनीति चाँडो चल्नु हो 'चीनको चिप उद्योग भन्दा।
NSCAI, नेतृत्वमा एरिक श्मिट, गुगलका पूर्व अध्यक्षले औंल्याए कि उन्नत चिप निर्माण उपकरणहरू अनुहार पहिचान निगरानी टेक्नोलोजी र अन्य उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
"अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा जटिल वेब आपूर्ति आपूर्ति चेन, अनुसन्धान साझेदारी, र विश्वको दुई एआई नेताहरू जोड्ने व्यापार सम्बन्ध द्वारा जटिल छ," आयोगका अनुसार।
एनएससीएआईको प्रतिवेदनले संयुक्त राज्यले जापान, नेदरल्याण्ड्स र अन्य देशहरूसँग समन्वय गरेर चीनलाई उन्नत चिप उत्पादन उपकरणको निर्यातमा लगायत निर्यात लाईसेन्स प्रणालीको स्थापनालाई नियन्त्रण गर्न समन्वय गर्न सुझाव दिएको छ।
लक्ष्य भनेको चीनको सेमीकन्डक्टर टेक्नोलोजी सधैं दुई पुस्ताले संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा पछाडि बनाउनु हो। थप रूपमा, अमेरिकी सेमीकन्डक्टर उद्योग ताइवान र दक्षिण कोरियामा सयौं दशक पछि आयोगले सेमीकन्डक्टर मैन्युफैक्चरिंग उद्योगलाई अमेरिकामा फेरि प्रवर्द्धन गर्न सिफारिस गर्‍यो।
बेलायत सरकारले युके स्मार्ट फ्यूचर जस्ता योजना सुरु गरिसक्यो उद्योग उद्योगका नेताहरूसँग काम गर्न उनीहरूलाई नवीन, अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न, र बेलायतमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउन। तिनीहरू कृत्रिम रूपमा बुद्धिमान सफ्टवेयर कम्पनीहरूले लिने दिशालाई प्रभाव पार्न सक्षम हुन सक्छन्, तर यस्तो देखिन्छ कि यो लामो शट हुन सक्छ।
यो पनि देखिन्छ कि चिनियाँ सरकार संयुक्त राज्यबाट कृत्रिम बुद्धिमता प्रतिस्पर्धाको बारेमा चिन्तित छैन। तिनीहरूसँग आफ्नै प्रोग्रामहरू छन् जुन संयुक्त राज्य अमेरिका र गुगलको भन्दा बढी उन्नत मानिन्छ। चीनको शीर्ष प्रतिस्पर्धी, ट्विटर, एक कृत्रिम खुफिया परियोजना शुरू गरिसक्यो यसको आफ्नै हो र रोबोटिक्स अनुसन्धानमा लगानी गर्दैछ।
यदि चिनियाँ सरकार साँच्चिकै प्रतिस्पर्धामा डराउँछ भने उनीहरू किन यस प्रकारको टेक्नोलोजीमा लगानी गरिरहेका छन्? यदि चीनले वास्तवमै आर्थिक रूपमा यसलाई अर्थपूर्ण बनाउँदछ भने किन प्रविधिले सबै फाइदाहरूमा ताला हाल्ने प्रयास नगरीकन आफ्नो पाठ्यक्रम चलाउन नदिने?
यदि युके सरकारले युनाइटेड किंगडम टेक्नोलोजीको आउँदो पुस्तामा पछाडि छोडिनेछ भनेर चिन्तित छ भने, यो मान्य चिन्ताको विषय हो। जहाँसम्म, तिनीहरूले चिन्तालाई कार्यमा अनुवाद गर्नु पर्छ। अक्सफोर्डमा ब्रिटेनको अनुसन्धान केन्द्रसँग तिनीहरू काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यो एक विश्व नेता रहनेछ। अन्यथा, ती टेक्नोलोजिकल लोप्सिडनेस मार्फत उनीहरूको वैश्विक स्थिति गुमाउने खतरा छन्।
यस्तो देखिन्छ कि भविष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन बीचको कृत्रिम खुफिया प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य छ। यद्यपि युनाइटेड किंगडमले आफूले काम गरिरहेको रोबोट किलर रोबोट निर्माण गर्न प्रतिबद्धता गरेनन् भने पनि तिनीहरू चिनियाँहरूले पछाडि छोडिनेछन्। यदि उनीहरू विश्वमा आफ्नो आर्थिक नेतृत्व कायम राख्न चाहन्छन् भने उनीहरूले समात्नका लागि एउटा मार्ग खोज्नुपर्दछ वा अन्यथा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कहिलेकाँही मेशिन इंटेलिजेंस भनिन्छ, बुद्धिमत्ता भनेको मेशिनहरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको हुन्छ, मानव र पशुहरूले प्रदर्शन गरेको प्राकृतिक बुद्धि विपरीत।
वर्तमान समयमा, बेलायतले यसको अनुसन्धान प्रयासहरू सकेसम्म राम्रा छन भनेर सुनिश्चित गर्न आफ्ना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। बेलायतले आफ्नो केमिकल र बायोकेमिकल ईन्जिनियरि Institute संस्थानमा ठूलो पैसा खर्च गरेको छ। यो कृत्रिम बुद्धिमत्ताको अध्ययनको लागि संसारमा सबै भन्दा राम्रो प्रोग्रामहरू मध्ये एक हो।
यदि यो पहिले सम्म बराबर थिएन भने, त्यसो भए यसलाई ठीक गर्नु पर्ने थियो। अन्यथा, कृत्रिम खुफिया अन्वेषकहरू सजिलै संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनमा पार गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन कि चिनियाँहरूले सफ्टवेयरको विकासमा राम्रो हुँदैछन् जुन उनीहरूलाई कृत्रिम रूपमा बौद्ध रोबोटहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। बेलायतले एक सुरुआत गर्नुपर्छ र यसको अनुसन्धान सुविधाहरूको उपयोग गर्नुपर्दछ।
अन्यथा, यसले आफूलाई यति पछाडि फेला पार्न सक्छ कि यसलाई कृत्रिम बुद्धि प्रतिस्पर्धामा चिनियाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। बेलायतले भविष्यमा कृत्रिम खुफिया प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्दछ।
अब जब कि चीनसँग कृत्रिम बुद्धिमत्ताको धेरै अनुभव छ, यसले निश्चित रूपमा कृत्रिम खुफिया प्रतिस्पर्धामा अमेरिका पार गर्नेछ। चिनियाँहरूले मात्र यो सुनिश्चित गर्न सक्दछन् कि कृत्रिम बौद्धिक रोबोट रचनाहरू मानिस जत्तिकै राम्रा छन् जब यो निर्णय लिने कुरा आउँछ।
अन्यथा, कृत्रिम रूपमा बुद्धिमान रोबोटिक मेशिन भविष्यमा यति उपयोगी छैन। त्यसोभए, युनाइटेड किंगडमले अब सुरुआत गर्नुपर्छ र यदि भविष्यमा यो एक सुदृढ राष्ट्र रहन भनेर सुनिश्चित गर्न चाहन्छ भने।
AI कृत्रिम खुफिया चीन सांप्रदायिक समाचार NSCAI